Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhacdada La Niña | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Ciencia, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Dhacdada El Niño ayaa laga maqlaa ku dhowaad meel kasta oo adduunka ah marka la eego saameynta ay ku leedahay cimilada adduunka. Si kastaba ha noqotee, waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso si fiican looma yaqaan. Taas bedelkeeda, waxaa sidoo kale jira dhacdo ka soo horjeedda El Niño oo loo yaqaan La Niña.
La Niña sidoo kale waxay soo saartaa isbeddelo muhiim ah oo ku saabsan cimilada meeraheeda iyo saameynteeda ayaa aad muhiim u ah. Sidaa darteed, waxaan si qoto dheer uga hadlaynaa dhacdadan. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato dhacdada La Niña?
1 Ifafaale El Niño
2 Dhacdooyinka La Niña
3 Cawaaqibta dhacdada La Niña
4 Wejiyada ifafaalaha La Niña
5 Waa maxay wareegyada muuqaalka La Niña leeyahay?
6 Miyaan joojin karnaa dhacdooyinkan?
Ifafaale El Niño
Si loo helo faham wanaagsan oo ku saabsan dhacdada La Niña, waa inaan marka hore si fiican u fahamno sida El Niño u shaqeeyo. Marka hore, maxay ugu yeeraan dhacdo iyo maxaa El Ni whyo ah? Dhacdo cilmiga dabiiciga ah maahan wax aan caadi ahayn, laakiin halkii muuqaal kasta oo muuqaal ah oo la daaweyn karo ka dib kormeer toos ah ama cabbir aan toos ahayn. Sidaa darteed, El Niño iyo roobka waa astaamaha saadaasha hawada.
Magaca El Niño waxaa siiyay kalluumeysatada magaalada Paita ee waqooyiga Peru iyagoo si maldahan u sheegaya ilmaha yar ee Ciise, tan iyo markii ay ifafaalahaani soo ifbaxay xilligii Kirismaska.
Waa maxay ifafaalaha El Niño? Hagaag, dabeecadda caadiga ah ee dabaysha ganacsiga ee Baasifigga ayaa ah inay afuufaan bari ilaa galbeed. Dabaylahaasi waxay biyaha ka riixaan xeebaha Koofurta Ameerika waxayna u qaadaan Oceania iyo Aasiya. Waxaas oo dhan oo isku uruuray biyaha kulul waxay dhaliyaan roobab iyo cimilo kuleyl ah meelahaas. Waxa ka dhaca Koonfurta Ameerika waa in dhammaan biyaha diirran ee dhaqaaqay lagu beddelo biyo qabow oo ka soo baxa moolka geeska dushiisa. Durdurkan biyaha qabow ayaa loo yaqaan Humboldt hadda.
Xaaladan biyaha kulul ee galbeedka iyo biyaha qabow ee bariga waxay abuureysaa kala duwanaansho heerkulka guud ahaan Badweynta Baasifigga, oo na siineysa cimilo kulul oo ku taal Oceania iyo qayb ka mid ah Aasiya. Dhanka kale, dabaysha sare ee jawiga waxay u dhaqaaqdaa jihada ka soo horjeedka, taas oo keenta hanaan wareegga hawada oo si joogto ah ugu riixaya biyaha diirran galbeedka. Tani waa xaaladda caadiga ah ee Badweynta Baasifigga iyo cimilada.
Laakiin ifafaalaha El Niño, oo si joogto ah ugu dhaca wareegyo saddex illaa shan sano ah, ayaa beddelaya dhammaan dhaqdhaqaaqyadan. Dhacdadani waxay ku bilaabaneysaa iyadoo keenta hoos u dhac ku yimaada dabeylaha ganacsiga, taasoo keeneysa in dhammaan biyaha diirran ee ku keydsan Oceania ay u dhaqaaqaan dhanka Koonfurta Ameerika Markay biyahani gaaraan xeebta, biyahan waxay uumi baxaan oo soo saaraan roobab culus oo aan caadi ahayn, halka cimilada dhinaca kale ee Baasifiguna ay isu rogto mid qallalan, keenaya abaaro daran.
Dhacdooyinka La Niña
Waxaad horey u ogeyd shaqada caadiga ah ee qulqulka badda iyo dabeylaha ganacsiga ee Badweynta Baasifigga. Hagaag, hadda way kuu fududaan doontaa inaad fahamto waxa ifafaalaha La Niña yahay.
Magaca La Niña waxaa loo doortay sababta oo ah waxay ka soo horjeeddaa Ilmaha, in kasta oo macno badan samaynayn, maadaama uu yahay Ilmihii Ciise. Markay ifafaaladani dhacdo, dabaysha ganacsigu waxay la kacdaa xoog ka xoog badan kan caadiga ah, taas oo keenta in biyo kulul oo aad u badan lagu keydiyo xeebaha Oceania iyo Aasiya. Markay taasi dhacdo, roobab daran ayaa ka dhaca goobahan, laakiin abaaro daran ayaa ka jira Koonfurta Ameerika.
Labadan dhacdo waxay soo saaraan kalluun yaraan iyo masiibooyin dabiici ah.
Dhacdada La Niña badanaa waxay socotaa bilo cawaaqib xumada ay keento waa kuwa soo socda:
Cadaadiska heerka badda wuu yaraanayaa ee gobolka Oceania, iyo koror isku mid ah oo kuleylka iyo badweynta Baasifigga ah ee ku teedsan xeebaha Koonfurta Ameerika iyo Bartamaha Ameerika; kaas oo sababa kororka farqiga cadaadiska ee u dhexeeya labada daraf ee isleegga Baasifiga.
Dabaylaha barwaaqadu way sii xoogaystaan, keenaya biyaha aadka u qabow ee ku teedsan dhul-badeedka Baasifig inay ku sii jiraan dusha sare.
Dabeylaha ganacsi ee aan caadiga aheyn waxay saameyn baaxad leh ku yeelanayaan dusha sare ee badda, waxayna kordhinayaan farqiga u dhexeeya heerka badda ee u dhexeeya labada daraf ee isleegga Baasifiga. Iyadoo taas leh heerka badda wuu yaraanayaa xeebaha Kolombiya, Ecuador, Peru iyo waqooyiga Chile waxaana ku kordha Oceania.
U ekaanshaha muuqaalka biyaha yara qabow ee ku teedsan Equator, heerkulka dusha sare ee badda ayaa ka hooseeya celceliska qiimaha cimilada. Tani waxay ka dhigan tahay caddaynta tooska ah ee jiritaanka dhacdada La Niña. Si kastaba ha noqotee, cilladaha kuleylka ee ugu sarreeya ayaa ka yar kuwii la diiwaan geliyey intii lagu jiray El Niño.
Inta lagu jiro dhacdooyinka La Niña, biyaha kulul ee dhulbaraha Baasifigga waxay ku urursan yihiin gobolka ku teedsan Oceania waana ku dhammaaday gobolkan halka uu ka soo baxo durdurrada qabow ee gabadha.
Roobabku waxay ku sii kordhayaan Koonfur-bari Aasiya, qaybo ka mid ah Afrika, Brazil iyo Australia, halkaas oo daadadku caadi ka noqon lahaayeen.
Soo noqnoqoshada duufaannada iyo duufaannada kuleylaha ee Mareykanka way sii kordhayaan.
Daad baraf oo taariikh ku noqon kara qaybo ka mid ah Mareykanka.
Abaaro waaweyn oo ka dhacay galbeedka Amerika, Gacanka Mexico, iyo waqooyi bari Afrika. Heerkulka goobahan ayaa xoogaa ka yaraadaya sidii caadiga ahayd.
Marka laga hadlayo Spain iyo Yurub guud ahaan, roobabku si weyn ayey u kici karaan.
Wejiyada ifafaalaha La Niña
Dhacdadan ayaan sidan oo kale u dhicin daqiiqad ilaa daqiiqad ku xigta, laakiin inay si buuxda isu muujiso, waxay soo martay wejiyo kala duwan.
Wejiga koowaad wuxuu ka kooban yahay ifafaalaha El Niño wuxuu bilaabay inuu daciifo. Caadi ahaan, labadan dhacdo waa kuwo meerto ah, markaa midba midka kale ka dib ayuu bilaabmaa. Marka dabaysha ganacsigu istaagtay ay bilawdo inay mar labaad kacdo oo hawadu hada si caadi ah u xasiliso, La Niña waxay bilaabi kartaa inay dhacdo haddii xawaaraha dabaysha ganacsigu ay bilawdo inay si aan caadi ahayn sare u kacdo.
La Niña waxaa loo yaqaanaa inay bilaabanto inay dhacdo markii dabaysha ganacsigu si xoog leh u kacdo waxaana jira wareeg hore oo ah aagga isu-imaatinka isku-dhafka woqooyi oo laga beddelayo meeshii caadiga ahayd. Sidoo kale, waxay kordhisaa aagga isku-gudbinta ee Baasifigga.
Saynisyahannadu waxay aqoonsadaan in La Niña uu soo korayo markay dhacdo:
Daciifinta hada jirta kana soo horjeedda dhulbarahaIsaga, oo keenaya in biyaha diirran ee ka imanaya xeebaha Aasiya, ay wax yar u dhintaan biyaha Baasifiga Ameerika.
Ballaadhinta goobihii badda, taas oo dhacda iyada oo ay sabab u tahay xoojinta dabaylaha ganacsiga. Dibad baxyadu waxay dhacaan marka qaddar badan oo dusha sare ah lagu beddelo biyo qabow oo qoto dheer oo dhammaan nafaqooyinka ka hooseeya lakabyada dusha sare ay kor u kacaan. Iyada oo ay ku badan tahay nafaqooyinka, noolaha iyo kalluunka halkaas ku nool ayaa sii bata oo waa wax aad u wanaagsan kalluumeysiga
Xoojinta xilligga koonfurta, gaar ahaan agagaaraha dhulbaraha, jiidaya biyo qabow oo yareynaya heerkulka bariga iyo bartamaha kulaylaha Baasifigga.
U dhawaanshaha weyn ee heerkulbeegga (gobolka ay jirto hoos u dhac degdeg ah oo heerkulka) ilaa dusha sare ee badda Baasifigga kulaylaha, taas oo doorbideysa sii jiritaanka noocyada badda ee raashinkooda ka hela muddo dheer.
Wejiga ugu dambeeya wuxuu dhacaa marka dabaysha ganacsigu ay bilawdo inay lumiso xooggeeda oo ay ku afuufto xoogga ay caadiyan sameyso.
Waa maxay wareegyada muuqaalka La Niña leeyahay?
Marka La Niña dhaco, badiyaa wuxuu socdaa inta udhaxeysa 9 bilood ilaa 3 sano, iyadoo ku xiran hadba xooggeeda. Caadi ahaan, muddada gaaban ee ay sii socotaa, ayaa sii kordheysa saameynta ay soo saarto. Saamaynta ugu daran uguna waxyeellada badan waxaa la muujiyaa 6-da bilood ee ugu horreysa.
Badanaa wuxuu ka bilaabmaa bartamaha sanadka, wuxuu gaaraa xoogiisa ugu badan dhamaadka, oo wuu faafaa bartamaha sanadka soo socda. Waxay u dhacdaa si ka yar sidii El Niño ay dhacdo. Badanaa waxay dhacdaa inta u dhexeysa 3 ilaa 7 sano.
Miyaan joojin karnaa dhacdooyinkan?
Jawaabtu waa maya. Haddii aan dooneynay inaan xakameyno jiritaanka ama xoojinta labada astaamo, waa inaan awoodnaa inaan xakameyno heerkulka Badweynta Baasifigga. Qaddarka biyaha ku jira badweyntaan awgeed, waa inaan isticmaalnaa dhammaan tamarta ka dhex jirta qaraxa 400.000 20 megaton hydrogen bambooyin mid kasta inuu awood u yeesho inuu kululeeyo biyaha. Mar alla markii aan taas sameyn karno, waxaan kuleyli karnaa biyaha Baasifigga sida aan doono, in kastoo aan mar kale qaboojin lahayn.
Sidaa darteed, illaa inta la helayo qaab lagu xakameeyo dhacdooyinkan, waxaan ka hortagi karnaa oo keliya, inaan ka feejignaano joogitaanka dhacdooyinkan si aan u awood ugu yeelano inaan abuurno siyaasado waxqabad iyo yareynta saameynta iyo, wixii ka sarreeya, gargaar loo fidiyo dhibbanayaasha.
Wali cilmi ahaan looma oga sababta ay dhacdooyinkan u dhacaan, laakiin waxaa la ogyahay inay si isdaba joog ah u dhacayaan isbeddelka cimilada awgeed. Kordhinta heerkulka adduunka ayaa khalkhal gelinaya jiritaanka ifafaalooyinkan iyo wareegga biyaha.
Macluumaadkan waxaan hubaa markasta oo aad maqasho magaca labada ifafaale, inaad xaqiiqdii ogtahay waxay tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhacdada La Niña
waa wax xiiso leh
Runtu waxay tahay, tani ma dhameystirna, waxay leedahay saameyn, laakiin ma ahan sababo, waxay iga dhigtay inaanan ku qancin natiijada.
Waa maxay arrinta mugdiga ah maxaase loogu talagalay
Xisaabtu waxay saadaalisaa in lixaadkii la baabi'in doono noocyada marka la gaaro 2100